Orinasa vita amin'ny tafo vita amin'ny tafo mitafo mavesatra China Shina | Lueding
Fitaovana: SGCC, SGCH, DX51D + Z
Taratasy fanamarinana: ISO9001, SGS, SAI, BV, sns
Fandeferana matevina: ± 0,02mm
Fandeferana amin'ny sakany: -0 / + 3mm
Takelaka vita amin'ny tafo vy Galvalume
● Ny ravina tafo vy galvalume dia vita amin'ny galvalume Steel coil ary karakarain'ny milina mpamorona horonan-taratasy.
● Ny tampon-tafo vy manohitra ny rantsantan-tànana dia nopetahany ranon-javatra manohitra ny rantsan-tànana amin'ny ravina galvalume ary mitana andraikitra amin'ny fanoherana ny harafesina. Aondrana any Azia atsimo atsinanana ny ankamaroany.
1) Ny fanoherana ny harafesin'ny ravina tafo vy galvalume dia 3 ka hatramin'ny 5 heny noho ny ravina vy mihombo, ary arakaraka ny hamafin'ilay harafesina no lehibe kokoa ny fahasamihafana. Noho izany, ao an-tampon'ny fanamboarana, dia tokony hofidina ny ravina vy galvalume mitafo vy AZ150.
2) AZ150 dia manodidina ny 10-20% lafo kokoa noho ny Z275, saingy ny fanoherana ny harafesiny dia 3 ~ 5 heny. Koa ny ravina vy vita amin'ny galvalume vita amin'ny galvalume dia manana fahombiazana tsara sy fahombiazan'ny vidiny.
Roofing vy nandrisika
● Ny tafo fanitso vita amin'ny vy mihombo dia vita amin'ny coil vy mandranitra ary alain'ny milina fanorona.
● Araka ny fahasamihafan'ny galvanizing dia mizara sponjy lehibe sy spangles aotra izy. Araka ny fomba famokarana, dia azo zaraina ho vy milomano mafana, vy mandeha ho azy, ary vy vita amin'ny firaka.
● Ny mpanjifa afrikanina dia mividy 0,13 * 665 ny halavany, miaraka amina tafo vy mitafo fanitso.
● Ao amin'izy ireo dia mivarotra takelaka vy mandrehitra mafana mihoboka noho izy ireo satria mandoto ny tontolo iainana ny famokarana takelaka vy mifangaro vy.
● Ny sary famantarana dia azo namboarina teo ambonin'ny tampon-taratasy vy nandrisika nifanaraka tamin'ny takian'ny mpanjifa.
Ny tafo mitafo vy mitafo fanitso dia manana lanjan'ny firakotra roa heny amin'ny 20-700 g / m2 araka ny fitsapana ASTM. Ny ravina vy manjelanjelatra ampiasaina matetika ho an'ny fampiharana tranokala dia Z275 sy Z450, ary ny habetsaky ny galvanizing dia 275 g / m2 (ny hatevin'ny ambany indrindra amin'ny sisin'ny sisin'ny vy dia 19 μm) sy 450g / m2.
Anaran'ny vokatra Takelaka tafo vy nandrisika
ara-nofo SGCC, SGCH, DX51D + Z
Fanamarinana ISO9001, SGS, SAI, BV, sns
hateviny 0.12mm-1.2mm, fandeferana matevina: ± 0.02mm
sakany 600mm-1250mm, fandeferana amin'ny sakany: -0 / + 3mm
Milanja isaky ny Pallet 3-5tona na takian'ny mpanjifa
Surface Sponjy tsy tapaka, nolokoina RAL
Fanantenam-piainana 10-30taona na 30-50taona
Fahaizana manome 8000tons isan-kerinandro
Fampiharana Fanamboarana, fanaovana bulide, toerana iasana sns
Fepetra fandoavana L / C, T / T, Cash, Alibaba.com Fiantohana ara-barotra
Ora nanomezana Fotoana famokarana ao anatin'ny 7 - 20 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko
fanaraha-maso Ny taratasy fanamarinana ny fanaraha-maso ny orinasa dia havoaka isaky ny fandefasana.
Ekena ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo.
Manaraka: Pipe vy